February 2012 | ကမ်းလက်
❖ ဘုရားဆေးနဲ့ဝေးတဲ့ရဟန်း ❖
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/29/2012 - No comments
မြန်မာတွေမရောက်ခင်က သင်္ဘောသီးစားရမှန်း နာဂတွေမသိကြသေးဘှုး၊
အများအားဖြင့်ဝက်တွေကို ခုတ်ပြီး ကျွေးကြတာ၊
စားလို့ရမှန်းလည်းသိရော အလကားသွားတောင်းလို့ မရတော့တဲ့အပြင်
သူတို့ပါ လိုက်စားလာကြတော့ ဝက်တွေသင်္ဘောသီး သိပ်မစားရတော့ဘူး။ ။
၂။ ပဲငါးပိနဲ့ ဆော်ယာဘီးမစ်(လ်ခ်)
ပဲငါးပိတို့ ပဲစင်းငုံတို့ကို ရေစိမ်ပြီး နွားတွေကိုအားရှိအောင် တိုက်ကြတယ်၊
အခုပဲငါးပိစိမ်ရည်ဖြစ်တဲ့ ဆော်ယားဘီးနို့တွေကို နိုင်ငံခြားကလူတွေ
အဲဒီနောက် ဈေးကြီးလွန်းလို့ ရွာက လူတွေတောင်
ပဲငါးပိတို့ ပဲစင်းငုံတို့ စားဖို့မလွယ်တော့ဘူး တဲ့။ ။
၃။ နွားကျင်ငယ်ရေနဲ့ ဖန်းခါးသီး
ဘုရားပေးတဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့ နွားကျင်ငယ်ရေနဲ့စိမ်တဲ့ ဖန်းခါးသီးကို
ဘုရားပေးတဲ့ဆေးမို့သာ အနံ့အသက်ကတော့ တော်တော်ကိုပြင်းတယ်။
တစ်ခါက ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်တစ်ပါးနဲ့ တစ်ခန်းထဲ နေခဲ့ရဖူးတယ်၊
သူက အဲဒီဆေးကို တစ်ခါဘုန်းပေးလိုက်ရင် လှောင်နေတဲ့အခန်းထဲ
အနံ့တွေစွဲကျန်ရစ်တာ တော်တော်နဲ့ မပျောက်တော့ဘူး၊
သူက စမ်းကြည့်ပါလားဆိုတော့ ဘုရားဆေးနဲ့ဝေးတဲ့ရဟန်းမို့
အနံ့ကို မခံနိုင်ဘူး၊ ဖြစ်ပုံက၊ အနံ့ပဲသောက်ခဲ့ရတော့တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဘုရားဆေးနဲ့ ဒီခေတ်ရဟန်းကလည်း
ဝက်နဲ့သင်္ဘောသီး၊ နွားနဲ့ ပဲငါးပိတို့ပဲစင်းငုံတိုလိုဖြစ်လို့။ ။
in စာတိုပေစ - on 2/29/2012 - No comments
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဘာသာတရား အများစုက လူသားအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရိုင်းပင်းမှုအကြောင်းပြောနေချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ မေတ္တာတရားကို စကြဝဠာ အဆုံးအထိ ချဲ့ဖြန့်လိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓါစရိတ ကတော့ တရစ္ဆာန်တ္ပေအပေါ် သနားကြင်နာမှုဟာ အစစ်မှန်ဆုံး ဘာသာတရားပါ တဲ့။
တိရစ္ဆာန်တ္ပေအပေါ် ညှာတာထောက်ထားကြဖို့ ပထမဆုံး ဥပဒေ ရေးဆ္ပဲခဲ့တာဟာ ဘီစီ သုံးရာစုက ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတစ်ပါး ဖြစ်တဲ့ အသောက မင်းမြတ်ပါပဲ။
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 2/28/2012 - No comments
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သတိရကြောင်း၊ ဘာကြောင်း ပြောခိုက်သတိရခြင်းသည်ကောင်း၏၊ ဘုရားရှင်လည်း ချီးမွမ်း၏၊ သတိကား ပိုသည်မရှိဟုပင်မိန့်တော်မူ၏ ဟု ခပ်ရွှန်းရွှန်းဖောက်နေခိုက် ရှင်နှောင်း ငယ်က "တင်ဝေသာ် လည်း မှတ်ထား ၊ မှတ်ထား...အင်း ဒါပဲနော်။
December 27, 2011 at 4:06pm · Like"ဟု ဇင်ဝေသော်ကို မပီတပီ ချစ်စနိုး ဖြင့် တင်ဝေသော်ဟုခေါ်ကာ သတိပေးသွား၏၊ ဝမ်းနည်းမိ၏၊ ရှင်နှောင်း ငယ်က သတိပေးသော်လည်း ရှင်နှောင်းကြီးက ဘာမှမပြောခဲ့။
Mg Ogga က" ရေရေလည်လည်မိုက်တဲ့ အတွေးဗျာ ဒါနဲ့ ကမ်းလက်က အချို့ စာတွေကို ကျနော်တို့ ဧ၀ံမေသုတံ ဘလော့မှာ အသုံးပြုခွင့် ပေးပါခင်ဗျာ ကြိုက်လို့"လို့ ရိုးသားစွာ ခွင့်တောင်းခိုက် ဘာပြန်ပြောရမလဲ စဉ်းစားနေစဉ် ကိုကြီး Khant က "ဘာမှမဟုတ်ဘူးရယ် ..တစ်ကယ်...နှစ်ခြိုက်သူတို့နမ်းပါစေ။။။:)" ဟူသော ကွန်မင့်လေးတက်ရေးသည်၊ ဒါနဲ့ပဲ အေးလေ နှစ်ခြိုက်သူတို့နမ်းပါစေ ပေါ့ ဟု ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားလေတော့သည်။
အဲဒီနေ့က အိပ်ယာထနောက်ကျနေခဲ့သည်၊ ဟို ဒကာ ဇင်ဝေသော် ရဲ့ညစာမစားဖြစ်တဲ့ အိပ်မက်များ အကြောင်းကို မဆီမဆိုင်လျှောက်စဉ်းစားနေခဲ့မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏၊။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောစာဖြစ်ပြီး ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းလည်းတိတိကျကျမသိ၊ ထို့ကြောင့်ပင် အာရုံဆွမ်းစားလက်ခံထားမိသည်ကိုမေ့လျော့ကာ နေမြင့်အောင်ပင် အိပ်လိုက်မိ၏၊ အာရုံဆွမ်းစားလွတ်သွား၏။ ဒါကို မဖြစ်မနေသိလိုက်သော Noble Moe က "ပျင်းတဲ့သူလွတ်မယ်ထင်တာ တော်သေးတာပေါ့သူလွတ်သွားလို့းD" ဟု လှမ်းနောက်သွားလေတော့၏၊အလွန်နောက်သော ဒါယိကာမပင်တည်း။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်နေသည်၊ ဆရာသမားက မိုးရွာချင်လုိ့ ဟု မိုးနှင့် အညောင်းအကိုက် မဆီမဆိုင်ဆက်စပ်၏၊အတန်ကြာမှ မ Khin San Yu က "သမိုင်းဟူသည် နောက်လှည့်လှည့်ကြည့်ရသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် အလွန်ဇက်ညောင်းသော ပညာရပ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သမိုင်းသင်ရန် အနှိပ်ခန်းလို၏။းp:p:p:p" ပီ ပီ ပီ ပီ ဟု ခရာမှုတ်ရင်း အကြောင်းတရား အမှန်ကို လက်ချာပေးသွား၏၊ ပါဠိတော်စကားဖြင့်ဆိုရမူ မှောက်ထားအပ်သောဝတ္ထုကို လှန်ပြလိုက် သကဲ့သုိ့ဖြစ်၏၊ အထဲမှာ ဘာရှိမှန်းတော့မသိ။ကြုံမှ မေးရပေတော့အံ့။( အံ့ ဟူသည် ဆရာအံ့ မဟုတ်၊)
မား ဆိုး က"အချိန်တိုင်းမှာ... အချိန်တိုင်းမှာ .. အချိန်တိုင်းမှာ .. ကိုယ်ခေါင်းငုံ့နေရတယ် ..........................."ဟု အယ်ဂျီးရီယားမှ နေပြီး လှမ်း၍ခေါင်းငုံ့၏။ အဆံပြည့်သော စပါးနှံဖြစ်ပုံရပါသည်၊ စပါးနှံသည် အဆံပြည့်လေခါင်းငုံ့လေတည်း။
ရေမြင်းစပါယ်ရှယ်လစ်အစစ်ဖြစ်လေသော အန်ဆီး ဒေါ်Win Win Yee က" ရေမြင်းတွေမှာတော့ အထီး ကကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ် တဲ့" ဟု ရေမြင်းအကြောင်း ရေခင်းပြစဉ် ဓာတ်တူရာပေါင်းမိပြီး ကုန်းပေါ် ကမြင်းကို မြင်းရာ မသွင်း၊ ရေထဲကမြင်းကိုမှ စိတ်ဝင်စားသောMoe Khant က ဒီကိစ္စ စိတ်ဝင်စားတယ်:) ဟု ကိုယ်ဝန်ဆောင် အငှားရှာဖွေလေတော့၏၊ ရေလူဖြစ်ချင်ပုံရ၏၊
မျက်မှန်တပ်ထားသောဆရာတော်တစ်ပါးက အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုဘာသာဖြင့်ရေးထားခဲ့လေရာ ယနေ့တိုင်မည်သူမျှ ဘာသာမပြန်ဆိုနိုင်သေးကြောင်းသိရ၏၊ ဝမ်းနည်း၏၊ မသိခြင်းကြောင့်၊ ဝမ်းသာ၏မသိခြင်းကြောင့်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါလေ။ " အိမ်း၊ အတိတအစညတ။"ဟုဖြစ်၏။ ထိုစဉ် Aye Thanda Tun က" ဤကား ဘာရေးနည်းမှန်းမသိသော စာရေးနည်းတည်း :)) "ဟု မှတ်ချက်ပြုလိုက်လေတော့၏။
လူ၌လူ့ဒုက္ခ၊ရဟန်း၌ရဟန်း ဒုက္ခ၊ ဘုရား၌ဘုရား ဒုက္ခ ရှိ၏၊ဆံပင်ရိတ်စဉ်က ဒုက္ခများပါမသွားသောကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူ၏။ ထို ဒုက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုက္ခရောက်နေစဉ် Bobo Koko ဆိုသော ထိုထို ထိုထို ပုဂ္ဂိုလ်က "မှန်ပါတယ်။ လူဆိုတာ ဒုက္ခတွေကိုပဲ ပွေ့ပိုက်ချစ်နေရတာပဲလေ။"ဟု ဂလိုဂလိုဆို၏၊သူ ပွေ့ပိုက်ချစ်နေရသော ဒုက္ခ၏ ဆိုက်က S လား၊ M လား၊ L လား XL လား မသိရ၊ ဒါကိုပင် ဘုမသိဘမသိ Khin Ye Lwinက" အော် ဒုက္ခ...ဒုက္ခ"ဟု ကောက်ရိုးပုံဘေး ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ် ထိုင်သောက်နေသေး၏။
ဤသို့ဖြင့်ပင်ကမ်းလက်လပတ်လည်သည် Nay Nwe Aung ပြောသကဲ့သုိ့ "စာရေးသူ၏ အိမ်မက်သည် အလွန်ချိုမြ သည်။ အိမ်တစ်လုံးဆောက်ချင်သည် ။............ နေရာ နေရာ နေရာ၏"ဖြစ်နေတော့၏။အိပ်မက်ချိုသူတိုင်း အိမ်ပိုင်မရှိ၊ နေရာမရှိ နရာ နေရာ၏။ ခက်သည်က သူမပြောသည်က အိပ်မက်မဟုတ်၊ အိမ်မက်ဖြစ်နေ၏။ ထို့ကြောင့် သူမသည် အအိပ်ကြီးခြင်ကိုမမက် အိမ်ရှိခြင်းကို မက်၏ ဟု သဘောပေါက်ရလေတော့သတည်း။
သီဟနာဒသည် မလျော်ရာ၌ အလွန်တော်၏ဟု စာရေးရန်စဉ်းစားခိုက် မောနေယျ ဟုအမည်ရသော ရဟန်းတစ်ပါးက လက်ရေးကိုကြည့်ကာမျှဖြင့် လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီး ဟောကိန်းထုတ်သွား၏၊တော်၏၊ချော်၏ ။ ဟူလို၊ထုရဟန်းကို ဖူးတွေ့ရသော် အဟော ဝတ ကောင်းလေစွ၊ ကောဏ္ဍည ပင် လူမြင်မှဟောနိုင်၏၊ မောနေယျ ကိုယ်တိုင် မောနေရသောကြောင့် လားတော့ မသိချေ၊ မမောစေ ချင်ပါ။ Ashin Khemacara မိန့်သကဲ့သို့" အများအတွက် ကောင်းမယ်ထင်ရင် လုပ်၊ အပြစ်ပြောမယ့်လူက ပြောမယ်။"
ရှင်နှောင်း ငယ် ပြောသကဲ့သို့ပင် "မငြိမ်းသေးသော...သာဓု သာဓု သာဓု။"
Lion's share. ခြင်္သေ့မင်းဝေစု
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 2/27/2012 - No comments
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ(ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊၁၉၀၀-ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊၁၉၇၇)
ဆရာတော်ကြီး၏မွေးနေ့သမယ၌ အကြိုက်ဆုံး မှတ်စု ဆယ်ခုကို မူးရင်းအတိုင်းပင် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
"အောက်နတ်များက အသားစားမရှောင်ကြသော်လည်းအထက်နတ်များကမူအသားစားရှောင်ကြ၍ သာသနာကိုလည်း ကြည်ညိုကြ၏ ဟုစာလာပေလာအရသိရသည်။ သို့ဖြစ်၍ သာသနာပြုရာတွင် အထက်နတ်ကြီးများ၏ အကူအညီရစေရန် အထက်နတ်ကြီးများအကြိုက်သက်သတ်လွတ်စားသည်။" တစ်ဘဝသာသနာ၊နှာ၃၈၄။
၂။ သုတ္တန်နဲ့ အဘိဓမ္မာ
"နတ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတွေဟောတုန်းကအဘိဓမ္မာတရားသားချည်းဟော တော့ နာလို့သာကောင်း တာ တရားမရကြပါဘူး တဲ့၊ ကြားထဲမှာ သုတ္တန်တရားတွှေပ်ညှပ်ပြီး ဟောတော့မှ သဘောပေါက်ကုန်ပြီးတရားရကြတာပါ၊အဲဒါကို ဘုန်းကြီးကအတုယူပြီး ယခုလည်း အဘိဓမ္မာသဘောကို သုတ္တန်နဲ့ နှောနှော၍ဟောနေပါတယ်၊ အဘိဓမ္မာ သဘော တရားချည်း ဟောနေပါလျှင် ဒီ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ငိုက်ကုန်မယ်။ ၎င်း နှာ ၃၈၆၊၃၈၇။
ဘုန်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာ သိပ်အဝေးကြီးကလှမ်းပြီးကိုးကွယ်နေရင် တရားဓမ္မမနာရလို့ ရသင့်တဲ့အကျိုး မဖွံ့ဖြိုးဘူး တဲ့၊ အနားကပ်လွန်းပြန်တော့လည်း ကြိုးတွေရှုပ်နေတာ ကိုမြင်ရ တတ်လို့ မကောင်းပြန်ဘူး တဲ့။ ၎င်း၊ နှာ၊၄၀၄။
"တပည့်တော်တို့နယ်မှာ ဟိုနှစ်တွေကဆိုရင် မိုးခေါင်တယ်ဘုရား၊ မနှစ်တုန်းကတော့သီလရှိတဲ့ ဆရာတော်တို့ကြွလာလို့ အဲဒီနောက် မိုးတွေလေတွေကောင်းတယ်၊ ဆန် စပါးတွေရကြတယ် ဘုရား၊ စောစောပိုင်းရက်တွေကလည်းရွာနေတာပဲ ဆရာတော်တို့ကြွလာခိုက်မို့ မိုးပြတ်ပေးတာပဲ၊" "ဒီလို မပြောကြပါနဲ့၊ တော်ကြာ မိုးမရွာလို့ စပါးမရရင် ဆရာတော်သီလပျက် သွားပြီလုိ့ပြောကြ လိမ့်မယ်။ ဒါ ဆရာတော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ ထန်းသီးကြွေခိုက်၊ကျီးနားခိုက် ဆိုသလိုဖြစ်ရတာပါ။ ၎င်း၊နှာ၊၄၂၉၊၄၃၀။
"ယခုနေ ငါ့ကို ရွှေကျင်သာသနာပိုင်လုပ်မလား လို့မေးရင် မလုပ်ချင်ဘူးလို့ဖြေမှာပဲ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုရင် နယ်ကျဉ်းလို့ပါပဲ...။" "အဲ တစ်သာသနာလုံးရဲ သာသနာပိုင်လုပ်မလား၊ပြီးတော့ သာသနာ ကြီးကို ပြုပြင်နိုင်တဲ့ အာဏာလည်း အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲ... သာသနာတော်ကြီးစိတ်ကြိုက် စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်ချင်လုိ့ပါပဲ။" ၎င်း၊နှာ၊၄၆၂။
"သူများနဲ့ မတူတာတော့ မတူတာ အမှန်ပဲကွ၊ကြည့်ပါလား...ခေါင်းရ်ိတ်တာကအစ တစ်နေ့တည်း တစ်ရက်တည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြောင်လို့၊ ဦးရေလေးတွေစိမ်းလို့..." "အင်း...အစစအရာရာ စည်းစနစ်နဲ့ ပြင်ထားတာကောင်းပါတယ်၊ ကြည်ညိုဖွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ညီလည်း ညီညာ ကြ ပေတယ်၊ဒါပေမဲ့...သိပ်ပြီးညီလွန်းတော့လည်း အမြင်ကပ်စရာဖြစ်နေ တတ်တယ်။" ၎င်း၊နှာ၊၄၆။
၇။ မျက်စိလည် လှူလိုက်ကြရော
"တို့မြန်မာပြည် သာသနာက ရှင်ဘုရင် အမတ်တွေက စတညထောင်ခဲ့တာ၊ ရှင်ဘုရင် ဆိုသူ တွေက သူတို့ကို နတ်ရုပ်ပေါက်အောင်ဆင်ထားကြတယ်၊ လှူကြ တန်းကြ ပေးကြ ကမ်းကြဆိုတော့ နှစ်ဖက်ရကြည့်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေက ဟောကြတာကိုး၊ ဒါနဲ့ ဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးကလည်း ဟောခလေး ရရော၊ လှူတဲ့သူကလည်း နတ်ပြည်ရောက်ချင်ဇောနဲ့ မျက်စိလည် လှူလိုက်ကြရော။" နံနက်ခင်း ဩဝါဒများ၊နှာ၊၂၀၅။
"နတ်ပြည်မှာ ခဍ္ဍာပဒေါသိကနတ် မနောပဒေါသိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်၊ဒီ နတ်နှစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကျတော့ အခြံအရံ နတ်သမီးတွေနဲ့ တကွ ဥယျာဉ်ကစားထွကကြတယ်၊ဒီအခါမှာ နတ်တစ်ယောက်က နတ်တစ်ယောက် ရဲ့ရှေ့ကို မြင်းရထား နဲ့ ကျော်တက် လိုက်တယ်၊ နောက် တစ်ယောက်က သူ့ရှေ ကျော်တက်ရပါ့မလားဆိုပြီး တကတည်း ဒေါသဖြစ်လိုက် တာ သေပါ လေရော၊ ဒါဟာ ဘာလဲ၊ဒေါသမီး အလောင်ခံရတာ။" နံနက်ခင်း ဩဝါဒများ၊နှာ.၆၂။
ငါ့သား သမီး၊ ငါ့ ဇနီးကို၊
ငါသာထောက်ပင့်၊ ငါ ချီးမြင့်ဖို့
"အနုဋ္ဌဟံ အဝါယမံသုခံ ယတြာဓိဂစ္ဆတိ။
သုဝီရ တတ္တ ဂစ္ဆာဟိ၊ မဉ္စ တတ္ထေဝ ပါပယ။
ချစ်သား သုဝီရ ထကြွလုံလမပါဘဲ၊ ဝါယမလည်း စိုက်စရာမလိုဘဲ
ချမ်းသာသုခ ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာရှိရင် အဲဒီနေရာကိုသွားပါ၊ ငါ့ကိုလည်းပို့စမ်းပါ။
(သိကြာမင်းကြီးက သားဖြစ်သူ သုဝီရ ကိုပြော သောစကား)...
ဒီနေရာမှာသတိရှိကြစမ်းပါ၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေ အပြည့်နဲ့ နေတဲ့
တာဝတိံသာက သိကြားမင်းကတောင် လုံ့လ၀ီရိယကို တန်ဖိုးထားတာ။ ၎င်း၊နှာ.၅၃၇။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 2/26/2012 - No comments
အင်အားကြီး အမေရိက နဲ့တရုတ်
ဘယ်တော့မှ စစ်မဖြစ်၊ မိတ်ပျက်မခံ။
စာရေးတစ်ယောက် အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်လို့
ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ စီအီးအို အတိုက်အခံမဖြစ်။
F18 လက်ထဲမှာမရှိရင် အမေရိကန်တွေက
F16 တိုက်လေယဉ်တွေ ရောင်းမထုတ်ဘူး။
F18 လက်ချက်နဲ့ ပြုတ်မှာပဲ။
ရော်နယ်ဒို မရှိလည်းဖြစ်တယ်လို့ မယုံကြည်ရင်
ဒီနှစ် နွားပြာက ခိုင်းလို့ရပြီလို့ မယုံကြည်ရင်
စာဥ ကို မရောင်းပါဘူး။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးပါ။
in စာတိုပေစ - on 2/26/2012 - No comments
ပထမဆုံး ဥရောပတိုက်သား ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော် တစ်ပါးပါ။
ဆာ အက်ဒ္ပင် အာနိုးရဲ့ အာရှတိုက် အလင်းရောင်ကိုဖတ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာသူပါ။
ဒီနောက် သီရိလင်္ကာ ကိုသ္ပားတယ်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိပြီး ရဟန်းဘဝကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါကြောင့် လူဝတ် လဲခဲ့ရပြိံး ၁၉၂၃ ခုမှာ အနိစ္စရောက်ခဲ့ရရှာပါတယ်။
ဥရောပ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ မီးရှူးတစ်ဆောင်ပါ။
in စာတိုပေစ - on 2/25/2012 - No comments
သူ့နာမည်သူ မြန်မာလို စာလုံးမပေါင်းတတ်တော့ဘူး၊
ရိုမင်အက္ခရာလက်ချက် နဲ အက္ခရာတွေကွယ်ကုန်တာ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/25/2012 - No comments
ဒကာတစ်ယောက် ရောက်လာ၏။ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဖြစ်၏။ ကျောင်းသို့ ပွဲလမ်းတစ်ခုခုအတွက် လာသူဖြစ်ဟန်တူ၏။ မတွေ့ဖူး၊ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်မသိ။
“ အရှင်ဘုရား၊ ကျောင်းက မြန်မာကျောင်းလား”
“ မြန်မာကျောင်းကားမဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းမျှသာ ဖြစ်၏။ လူမျိုး၏ အမည်မရှိသင့်၊ ကျဉ်း၏။”
ထိုဒကာ၏ ပျော်ရွှင်မှု ရာခိုင်နှုံး (၃၅) လျော့ကျသွား၏။
“ မဟုတ်။ ဤမျှမစွမ်း။ ပိဋကတ်သုံးပုံ စီဒီကားရှိ၏။ ထို့ကြောင့် တိပိဋကဓရဟု မခေါ်နိုင်သော်လည်း တိပိဋက စီဒီဓရဟု ခေါ်နိုင်၏” ( လူများအတွက်၊ ဓရ- ဆောင်)
ထိုဒကာ၏ ပျော်ရွှင်မှု နောက်ထပ် (၃၅) ရာခိုင်နှုံး လျော့ကျသွားပြန်၏။
သူ့ထံ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ကျန်နေသော ပျော်ရွှင်မှု (၃၀) ရာခိုင်နှုံးဖြင့် နောက်ထပ်မေးခွန်း မေးပြန်၏။ သူကြိုးစား၏။ သူကြိုးစားမှန်းလည်း သိ၏။
“ ဒါဆို အရှင်ဘုရားက ဒေါက်တာပေါ့နော်”
“ မဟုတ်၊ ဤမျှမစွမ်း ယနေ့တိုင် လူနာသာ ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်၏။”
ထိုဒကာ၏ ပျော်ရွှင်မှုအားလုံး ကုန်သွားပြီ ဖြစ်၏။ ဘာကြောင့် ဤသို့ ပြောနိုင်သနည်း ဟူမူ နောက် ထပ်မေးခွန်း မမေးနိုင်တော့သောကြောင့်ပင်တည်း။ သူစိတ်ညစ်သွား၏။ ရဟန်းလည်း မပျော်ပါ။ ဤရဟန်းမျိုးနှင့် စကားဆက်ပြောရန် အကြောင်းမရှိတော့ဟု နောက်ကျစွာ၊ နောင်တရစွာ သိလိုက်ရလေ ဟန်တူသည်။
မိမိ၏ အယူအဆသည် “နက်” ၏။ ကောင်းသော နက်ခြင်းကားမဟုတ်၊ အဝီစိကဲ့သို့ နက်နေခြင်းတည်း။ မတတ်နိုင်။ ဘဝကား လေး၏။ လေးပြီးသားဘဝ၌ အက်ဂျစ်တစ် များ ကျောပိုး အိတ်ထဲထည့်ပြီး ခရီးမသွားချင်။ ဘာမှ မဟုတ်၊ ကိလေသာဆယ်ပါး နဂိုရင်းအတိုင်း ရှိသေး၏။ မထိရသေး။ အက်ဂျစ်တစ်ကိုကား သိပ်အက်ပီတိုက် မဖြစ်။ ဤမျှသာ။
ခန္ဓာငါးပါး၏ဝန်သည် အလေးဆုံးဟု မိမိအကြည်ညိုဆုံး ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ဟောခဲ့၏။ ဘယ်သုတ်မှာ ဟောခဲ့မှန်းတော့ မသေချာ။ စီဒီတွင် အလွယ်တကူ ရှာနိုင်၏။ ယုံချင်သူများ ပို၍ ယုံချင်အောင် လုပ်ပြနိုင်၏။ မလိုဟု ထင်သည်။ ခန္ဓာဝန်သည် လေး၏။ ဝဖီးသော ခန္ဓာသည် ပို၍လေးဟန်ရှိ၏။ ရောဂါပို၍ ထူပြောတတ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ မယုံကြည်သူများ ကတ္တားပေါ်တင်၍ မိမိကိုယ်ကို မိမိချိန်ကြည့်နိုင်၏။ ခန္ဓာဝန်သည် လေး၏။ လုံလောက်ပြီ။ ဘယ်ဘွတ်အုပ်၊ ဘယ်သုတ်မှ မလိုတော့။ သူများကို ပြောလျှင်တော့လိုမည်။ ကိုယ်သိဖို့တော့ စကားလုံးမလို။ လေး၏။ သိ၏။ ပို၍ လေးလေးလာ၏။ ထို့ကြောင့် နံနက်တိုင်း လမ်းလျှောက်ဖြစ်၏။ မဆိုးလှ။ အနည်းငယ် ပေါ့၏။ အပျင်းထူလျှင် လေးလာပြန်၏။
ခန္ဓာလေးခြင်းနှင့် ပျင်းရိခြင်းသည် အီကွဲဖြစ်၏။ ပို၍ ပျင်းလျှင် ပိုလေးမည်။
နောက်တစ်နေရာ၌ အကြည်ညိုဆုံး ဂေါတမဗုဒ္ဓက ဟောပြန်၏။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းသည် အဆိုးရွားဆုံး ရောဂါဟူ၍ ဖြစ်၏။ မှန်၏။ ဘယ်သုတ်မှာ ဟောခဲ့မှန်းတော့ မသိ။ သိသူများကလည်း (ကျေးဇူးပြု၍) ထောက်မပြစေချင်။ သီဟနာဒ၌ ပိဋကတ်သုံးပုံ စီဒီရှိ၏။ မလို၍ မရှာတော့။ လိုလျှင် ရှာမည်။
ဤဒေသနာကို ကိုရင်စဝတ်သောနေ့ကပင် ကျကျနနသိခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းသည် အလွန်ဆိုးရွားသော ဝေဒနာဖြစ်၏။ စကားလုံး မလို။ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟု သုံးခဲ့ရခြင်းကိုလည်း ပြောချင်၏။ ဘုရားအဆူဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးပြီဟု စာပေ၌လာ၏။ ကိုယ်တိုင်မူ မသိ။ ဤဘုရားကို ကိုယ်တိုင်တော့ မဖူးတွေ့ခဲ့ရ။ မိုက်လုံးထွား၏။ သို့သော် ဤဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများကို သင်ရ၏။ ကြည်ညိုရ၏။
ရိုးရိုးသားသား ပြောအံ့။ ဘုရားရှင်ခြင်း တူပင်တူသော်ငြား ဤဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားကို ပို၍ ကြည်ညို၏။ ပို၍ လေးစား၏။ မတတ်နိုင်။ မိမိသည် ပုထုဇဉ် အရိုင်းတုံးမျှသာရှိဆဲ။ ကိလေသာ (၁၀) ပါး မူရင်း အော်ရီဂျင်နယ်အတိုင်းရှိဆဲ။ ရိုးသားတော့ ရိုးသားချင်သည်။ ဤဂေါတမဗုဒ္ဓကို ပို၍ ကြည်ညိုသည်။ ဤစကားကြောင့် ငရဲသွားရမည်ဆိုလျှင် သွားချင်၏။ ရိုးသားသူတို့၏ ငရဲ။ (ကိုရဲ၊ မရဲတို့ ဝင်ဝင်မရှုပ်စေချင်)
၁။ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးဟုပင်ခေါ်ချင်သည်။
၂။ ဒေါက်တာ ဉာဏ ဟု မခေါ်ချင်။
ဤစကားကြောင့် ငရဲသွားရမည်ဆိုလျှင် သွားချင်၏။
ထို့ကြောင့် မိမိ၏ ယုံကြည်မှုတစ်ချို့သည် “ နက်” ၏။ ကောင်းသော နက်ခြင်းကား မဟုတ်။ အဝီစီကဲ့သို့ နက်ခြင်းတည်း။ မတတ်နိုင်၊ ခပ်တိမ်တိမ်တော့ မဖြစ်ချင်။ ခပ်ပေါပေါ မဖြစ်ချင်။
စာရေးပြီးအဆုံး၌ ပြုံးလိုက်သည်။ ထိုအပြုံးကား ဆာကတ်စတစ် အသံလေးပါ၏။ မတတ်နိုင် ပြုံးလိုက်မိပြီ။ တောင်းပန်ပါ၏၊အစ်ကို ညီတို့……။
in စာတိုပေစ - on 2/24/2012 - No comments
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ သီရိလင်္ကာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေနဲ့ ငြိစ္ပန်းပေမဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ တရားဥပဒေနဲ့ တားမြစ်ထားတာ မရှိပြန်ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဇင် အင် အဘောရှင်း၊ဒါမိယမ် က္ပန်း၊၁၉၉၉။
ရဟန်း၊ စင်္ကာပူ ကက်(စ်)ကက်နှင့် အသုဘဘာဝနာ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 2/23/2012 - No comments
စင်္ကာပူမှာနေထိုင်သည့်သူများမဟုတ်လျှင် စင်္ကာပူကက်(စ်)ကက်ကို သိကြမည်မဟုတ်။ ထိုစင်္ကာပူကက်(စ်)ကက်သည် ကိုကျော်သူတို့ နာရေးအသင်းကဲ့သို့သော အသင်း (သို့) ကုမ္ပဏီဖြစ်၏။ အလကားတော့ မရချေ၊ ဈေးကြီး၏။ သုံးရက်ထား အသုဘ၊ ငါးရက်ထား အသုဘ အမျိုးမျိုးဖြစ်၏။ သူ့ကြေးနှင့် သူဖြစ်၏။ အစအဆုံးလည်း တာဝန်ယူ၏။ ဘုန်းကြီးအထိ ပင့်ပေး၏။
ဤကိစ္စရှိစေတော့။ ယခုပြောလိုသည်မှာ ရဟန်းနှင့် အသုဘ၊ ကက်(စ်) ကက်နှင့် အသုဘ ဖြစ်၏။
အန္တရာယ်ကင်းအောင် မိမိကိုယ်ကို ဆွဲထုတ်အံ့။
ယခု မိမိနေသောကျောင်း၏ အဓိက ထောက်ပံ့ခဲ့သူများသည် အသက်(၇၀) နှင့်(၈၀) အတွင်း တွေများသည်။ ပြောရသည်တော့ မကောင်းလှ။ ထိုအသုဘ ဘာဝနာနှင့် ရင်းနှီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်က အသုဘရှုတစ်ခုခုကို သွားရသည်ဆိုလျှင် အလွန်တုန်လှုပ်မိ၏။ သေခြင်းတရား အကြောင်းကိုလည်း ထိုမှဆက်စပ်ကာ မကြာမကြာ တွေးမိ၏။ ယခု အသုဘရှုသွားရသည့်အခါ စိတ်ထဲမှာ ထုံသွားသလိုလိုရှိ၏။ အလွန်မသင့်တော်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူ ကက်(စ်)ကက်က လူတွေလိုဖြစ်နေပြီလား။
ထိုသူများအတွက် အသုဘသည် စီးပွါးရေးဖြစ်သည်။ သေသူကိုကြည့်၍ သေခြင်းတရား အကြောင်း စဉ်းစားရမည်ဟု မတွေးတောကြ။ အသုဘတစ်ခုလာအပ်သည်။ အလုပ်သဘောအရ ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးပြီ ဖြစ်၏။ သူတို့ကို အပြစ်ဆို၍မရ၊ ဤသည်မှာ သူတို့၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။
ရဟန်းကား ဤသို့ မဖြစ်သင့်။
“ဗုဒ္ဓါနုဿတိ မေတ္တာစ၊ အသုဘံ မရဏဿတိ” ဟု ဘုရားဟောရှိသည်။ အသုဘ ဘာဝနာနှင့် မရဏဿတိကို ဆင်ခြင်ပွါးများနေသင့်၏။
ဘုရားအဆုံးအမရှိသော်လည်း တွေ့ကြုံဖန်များလာသောအခါ ထိုအသုဘ ဘာဝနာနှင့် မရဏဿတိတို့သည် ထုံသလိုလိုဖြစ်လာ၏။ ဤကိစ္စကို မငြင်းရဲ။
မည်သို့ဖြစ်စေ စင်္ကာပူကက်(စ်)ကက်က လူတွေလိုမဖြစ်ရန်မူကား အသေအလဲ ကြိုးစားရမည်။ ထိုမှနောက်….
╰⊰⊹✿ ဒုတိယအကြိမ် လောကချမ်းသာ သဲပုံစေတီ ပူဇော်ပွဲ ဖိတ်ကြားနှိုးဆော်လွှာ ✿⊹⊱╮
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/22/2012 - No comments
စင်္ကာပူနိုင်ငံ East Coast ကမ်းခြေတွင် စုပေါင်းတည်ထား ကိုးကွယ် ပူဇော် မည့် လောကချမ်းသာ သဲပုံစေတီတော်ကြီးအား မူလသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သော
( ၂၄-၀၂-၂၀၁၂ ~ ၂၆-၀၂-၂၀၁၂) အစား (၀၉-၀၃-၂၀၁၂ ~ ၁၁-၀၃-၂၀၁၂) သို့ပြောင်းလဲ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်း တို့အား လေးစားစွာဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ကို အဘိဓမ္မာ အသင်းကြီး(စင်္ကပု) ၏ Facebook တွင်ကြည့်ရှုကြပါရန်
Note Link : click here
in စာတိုပေစ - on 2/22/2012 - No comments
အသောကမင်းရေးထိုးခဲ့တဲ့ အက္ခရာတ္ပေဟာ ရှေးအကျဆုံးပါ၊ ဗြဟမီ လုိ့ခေါ်ပါတယ်။
အက္ခရာ ၇၂ လုံး ရှိပြီး ဘယ်ဖက်ကနေ ညာဖက်ကို ရေးရတယ်။
အဲဒီဘာသာဟာ နောက်ပိုင်းမာတော့ သီရိလင်္ကာ၊တိဗက်၊မြန်မာ၊ထိုင်း နဲ့
ရှေးဟောင်း မလေးအက္ခရာတ္ပေဆီအထိ ရောက်ရှိ လွှမ်းမိုးသ္ပားခဲ့ပါတယ်။
╰⊰⊹✿ ဒုတိယအကြိမ် လောကချမ်းသာ သဲပုံစေတီ ပူဇော်ပွဲ ဖ...
A Lady Who I Knew
ဆင်ရယ်၊ ထီးရယ်၊ အိမ်သာကြွေခွက်ရယ်
✿◕ ‿ ◕✿ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း ✿◕ ‿ ...
~ ကျောင်းသား ~
☺ ဘရန့် နယူး ဗုဒ္ဓဘာသာ ☺
ဒါက ဘာ“ဇ” ပါလိမ့်
❄ အနိစ္စ ရိုးပြတ်တော ❄
~ မေတ္တာ ~